Ebe a na-adọba ụgbọala: Sistemụ imeghe ebe ị na-adọba ụgbọala na ekwentị - OFFER | Akụkọ akụrụngwa
Eder Esteban | | Ngwa
Ma ị biri n’ụlọ nwere ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ n’obodo ndị agbata obi, A na-ejikarị igodo pụrụ iche ma ọ bụ akara ntanetị na-emepe ụlọ ndị a. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume, na ihe karịrị otu oge, ịnwere ọtụtụ njikwa latrịl ebe ọ bụ na ị nwere ọtụtụ ụgbọala ịbanye, dị ka nke dị n'ụlọ na nke na-arụ ọrụ. Ya mere, iji nweta ha niile n'otu ebe, ọtụtụ na-achọ ihe ngwọta dị mma na nke a. Nke a ga-ekwe omume site na Parkingdoor.
Ebe a na-adọba ụgbọala bụ sistemu ga-etinye n'ime ebe ndọba ụgbọala ngwa na ekwentị gị, dakọtara na gam akporo na iOS. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike imeghe ụgbọala n'oge ọ bụla ekele maka ekwentị anyị n'ụzọ dị mfe ma dịkwa nchebe, yana ngwa ngwa.
Ọzọkwa, ihe na-adọrọ mmasị banyere sistemụ a bụ na ị nwere ike nye ndị ọzọ ikike imeghe ọnụ ụzọ ụgbọala ahụ, nke mere na, ọ bụrụ na ị na-atụ anya nleta, ị nwere ike inye ha ikike ịbanye site na ịtọ oge ma ọ bụ oge ụfọdụ ịchọrọ ekele maka ngwa Parkingdoor.
Ọzọ nke uru ya bụ na ngwa ahụ na-arụ ọrụ Enweghị njikọ ịntanetị. Nke a bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ site na Bluetooth ka anyị wee nwee naanị njikọ Internetntanetị n'oge usoro nhazi mbụ, mgbe ahụ ọ gakwaghị adị mkpa.
1 Olee otu ebe a na-adọba ụgbọala
2 Otu esi enweta ya na ego 30%
Olee otu ebe a na-adọba ụgbọala
Ebe a na-adọba ụgbọala, bụ ụzọ ịghara ichegbu onwe gị banyere ịnwe isi ma ọ bụ njikwa ime ụlọ ebe a na-adọba ụgbọala n'elu, nke echefuru echefu n'oge ụfọdụ. Na usoro a only ga-achọ naanị ekwentị mkpanaaka gị. Ya mere, ị ga-enwe ike ịbanye na ụgbọala ahụ n'ụlọ gị, n'obodo gị, na ụgbọala na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ebe etinyela ngwaọrụ ahụ.
N'otu aka, anyị ga-enwe ngwaọrụ ahụ nke a ga-etinye n'ime ụgbọala ahụ n'onwe ya, n'ime ya, n'akụkụ ọnụ ụzọ site na ntinye dị mfe ị nwere ike ime onwe gị. Ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, anyị ga-akpọ gị ma na nkeji ole na ole ị nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ ya.
Na nke ọzọ, anyị ga-enwe budata ebe a na-adọba ụgbọala na ekwentị gị (dakọtara na gam akporo na iOS) ma mepụta nhazi dị mfe nke akaụntụ ahụ iji nwee ike iji ya dị ka usoro ọhụrụ iji mepee ụgbọala ahụ.
Dịka anyị kwurula na mbụ, Parkingdoor na-enye anyị ohere ịmepụta igodo dijitalụ, na-enye ndị ọbịa ohere anyị chọrọ. Otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma bụ na anyị nwere ike setịpụ oge ma ọ bụ etiti oge na nke a kapịrị ọnụ onye nwere ohere na-arụzi ụgbọala, a ohere ịbụ revocable n'oge ọ bụla na ozugbo.
Na mgbakwunye, ọ naghị egbochi sistemụ mmeghe gara aga, yabụ ndị chọrọ ịga n'ihu na-abanye ụgbọala n'ụzọ ọdịnala, ga-enwe ike ịga n'ihu na-eme ya.
Otu esi enweta ya na ego 30%
Dị ka i si hụ, ọ bụ usoro nwere nnukwu mmasị maka ọtụtụ ndị ọrụ, nke anyị nwekwara ike iji na-arụzi ụgbọala na ebe a na-arụzi ụgbọala, nke na-agbasawanye ohere nke iji ọrụ a na ihe nyeere Parkingdoor aka inweta ebe dịka nhọrọ nke ndị kachasị ewu ewu na mpaghara a.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, Parkingdoor dị ugbu a na ego 30% nwa oge. N'ụzọ dị otú a, ị nwetara ngwaọrụ ị ga-arụnye n'ime ụgbọala, nke ị ga-eme na nkeji nkeji, na ọnụahịa kachasị mma. Nwere ike ịzụta ya ugbu a site na njikọ a Yabụ ọ bụrụ na ị chọpụtala na ọ na-atọ gị ụtọ, egbula oge ịzụta ya na nkwalite nwa oge a. Kedu ihe ị chere banyere usoro a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ebe a na-adọba ụgbọala: Jiri ekwentị gị mepee ụzọ ndọba ụgbọala gị (koodu ntinye ego 30%)